မြတ်လေးငုံ: ၁၉၄၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၂ရက်နေ့ ညနေ ၇နာရီ၊ ၁၅မိနစ်အချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အသံလွှင့် မိန့်ခွန်းတချို့.
၁၉၄၆ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၂ရက်နေ့ ညနေ ၇နာရီ၊ ၁၅မိနစ်အချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အသံလွှင့် မိန့်ခွန်းတချို့.
ဗိုလ်ချုပ် ပြောသောမိန့်ခွန်းများက ယနေ့ ချိန်ထိ ထိရောက်မှုရှိနေတုန်း
သတ္တိစမ်းမယ် ဆိုရင်တော့ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး အတွက် တကယ်တမ်း၊ လုပ်တမ်းဆိုရင် ထွက်ခဲ့ပါ။
မဟိန်းတမ်း မဟောက်တမ်း၊ တကယ်လုပ်တမ်း ပြိုင်ရဲပါတယ်။
ကျုပ်အကြောင်းတွေလဲ ခင်ဗျားတို့ သိတန်သလောက် သိကြမှာပဲ၊ ဒါပေမဲ့အကုန်တော့ ဘယ်သူမှ သိကြမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်ကလဲ မကြွားချင်ပါဘူး။
ကျုပ်နိုင်ငံရေး လုပ်နေတာ ကြွားချင်လို့လဲ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
ဗမာပြည် လွတ်လပ်ရေးရစေချင်လို့၊ ဗမာတွေ ကောင်းစားစေချင်လို့ လုပ်တာပါ။
နိုင်ငံရေးလုပ်တာ ကျုပ်အဘို့မယ် မြတ်တယ်လို့ကိုမထင်ဘူး၊ အရှုံးနဲ့ချည်း လုပ်နေရတာဘဲ။ ယခုဝန်ကြီးဖြစ်ရပေမယ့် ကျွန်တော့မှာ ဘာမှထူးထူးခြားခြင်း မရှိဘူး။
ဂျပန်ခေတ် တခေတ်လုံးကလည်း စစ်ဝန်ကြီးဆိုပြီး ကျွန်တော့မှာ အဝတ်နှစ်ထည်၊ သုံးထည်ကလွဲပြီး အပိုမရှိခဲ့ဘူး။ ခုခေတ်ရောက်ပြန်တော့ ဒါတွေကိုဝတ်နေရတာဘဲ၊ ယခုဝတ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီနှင့်အင်္ကျီတောင် ယခုဝန်ကြီးရာထူးကို ဝင်ယူပြီးမှ မိတ်ဆွေတွေက ကြည့်မကောင်းလို့ အတင်းချုပ်ခိုင်းတာနဲ့ ကြံဖန်ပြီး ချုပ်လိုက်ရတယ်။
ယခုဝန်ကြီးအဖြစ်နှင့် လခဘယ်လောက် ယူမယ်ဆိုတာ ဖ၊ဆ၊ပ၊လ က မဆုံးဖြတ်သေးဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲ ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ် ကျုပ်မှာ စားလောက်ရုံလောက်က ပိုမှာမဟုတ်ဘူး။
ပိုက်ဆံမရလို့ ဂုဏ်ဆိုတာကတော့ ဝန်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အတွက် ဘယ်လောက်များ တက်သွားသလဲလို့ မေးကြစမ်းပါ။ ယခုလို မီးတောင်ကြီးပေါ်မှာ တင်ထိုင်နေရတာနဲ့တူတဲ့ ဝန်ကြီးရာထူးဆိုတာ ခုနေအခါ ကျုပ်တို့ ယူချင်တာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကြောင်းကြောင်းတွေ ထောက်ပြီး၊ မျက်စေ့မှိတ်ပီး စွန့်ယူရတာဘဲ။
လူထုကြီးက ကျုပ်ကိုပေးထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကို၊ ဝန်ကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ထက် ကျုပ်ပိုမက်တယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားလိုက်ကြပါ။
ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဆိုရင် ဝန်ကြီးဆိုတဲ့ဂုဏ်ဟာ၊ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ရဲ့ခြေဖျားမှာ ကပ်နေတဲ့ ခြေမှုန့်လောက်ပဲလို့ ကျုပ်မှတ်ထားပါတယ်။ အတိုချုပ်ရမယ်ဆိုရင် ကျုပ်ဘယ်လိုလူလဲ၊ မိန်းမရေးမှာ ရှုပ်ထွေးသလား၊ တခြားလုပ်ဖေါ် လုပ်ဖက်တွေကို ချောက်တွန်းခဲ့သလား အစရှိတဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကို လူထုရဲ့ရှေ့မှာ ဘယ်အချိန်အခါမဆို တကယ်အစစ်ဆေးခံရန် အသင့်ရှိတယ်။
ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင်တွေရော၊ တခြား ဖ၊ဆ၊ပ၊လ ပြင်ဘက်က ခေါင်းဆောင်တွေရော အစစ်ခံဝံ့ရဲ့လားလို့ ကျုပ်နောက်ဆုံးစကား ဆိုလိုက်တယ်။
ကျွှန်ုပ်တို့၏ကံကြမ္မာကို ကျွှန်ုပ်တို့ ဖန်တီးဘို့အရေးသည် ကျွှန်ုပ်တို့၏ လက်တွင်မှာပင်ရှိ၏ ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, July 10, 2011